Waligii Waxa Uu Sii Ahaanayaa Geesigayga- Sadio Mane Oo Soo Bandhigay Xidiga Barcelona Ka Soo Ciyaaray Ee Uu Wali Jecel Yahay In Uu Ku Daydo. – Latest Sports News
Waligii Waxa Uu Sii Ahaanayaa Geesigayga- Sadio Mane Oo Soo Bandhigay Xidiga Barcelona Ka Soo Ciyaaray Ee Uu Wali Jecel Yahay In Uu Ku Daydo.
Xidiga xulka qaranka Senegal iyo kooxda Liverpool ee Sadio Mane ayaa soo bandhigay xidiga Barcelona ka soo ciyaaray ee uu inta ugu badan jeclaa isla markaana uu ku soo dajan jiray. Mane ayaa hadalkan ka sheegay mar uu ka hadlayay shirka jaraa’id ee kooxdiisa Liverpool ee ka hor kulanka caawa ee Barcelona.
Sadio Mane ayaa tilmaamay in Ronaldinho uu haaa ciyaartoyga uu inta ugu badan jeclaa in uu daawado isaga oo ciyaara wuxuuna ku dooday in uu jeclaan lahaa in uu ka hor iman lahaa. Sadio Mane ayaa ku kaftay in marka uu garoonka ku jiro ee aanu qoslayn in dadku ay u qaataan in uu cadhoonayo balse uu jeclaan lahaa in uu yeesho dhoola cadayntii Ronaldinho.
Sadio Mane oo ka hadlaya sida uu Ronaldinho u jeclaa ayaa yidhi: “Xaqiiqdii waxaan jeclaa daawshada isaga oo ciyaaraya, gaar ahaan halkan Camp Nou. Waxaan jeclaan lahaa in aan isaga ka hor iman lahaa. In isagu aanu halkan hadda joogin faa’iido ayay anaga noo tahay. Wali waan jecelahay isaga, isagu wali waxa uu waligii sii ahaanayaa geesigayga.
Sadio Mane oo ka sii hadlaya Ronaldinho ayaa yidhi: “Anigu waxaan jeclaa xirfadiisa iyo hubaashii dhoola cadayntiisii. Laga yaabee in marka aan garoonka ku jiro ee aanan dhoola cadaynayn ay dadku ka fikraan in aan cadhoonayo, waxaan jeclaan lahaa in aan yeesho dhoolo cadayntiisa, laakiin sidaas iskugu mid ma nihin”.
Sadio Mane oo gool dhalinta kooxdiisa Liverpool ka hadlaya ayaa yidhi: “Aad ayay Liverpool muhiim ugu tahay in ay haysato ciyaartoy isku dayaya in ay kooxda gool dhalin ku caawiyaan oo uu midba kan kale caawin u sameeyo”.
“Anaga way noo fiicnaan doontaa in aanu garoonkan (Camp Nou) ku ciyaarno maadaama oo ay koox kastaaba doonayso in ay ku ciyaarto, laakiin cadaadis dheeraad ah ma aha, anaga way na dhiiro galinaysaa in aanu natiijo fiican ku helno”.
Sadio Mane ayaa xili ciyaareedkan ahaa ciyaartoyga ugu muhiimsan ee Liverpool waqtiyo badan oo adag ka soo saaray waxayna markale sugayaan in uu shaqadii kulankii Bayern Munich oo kale uu sameeyo.